Tag: waa maxay | Martech Zone
Tag: waa maxay
In kasta oo qiimayaashu ay sii wadaan inay hoos ugu dhacaan martigelinta iyo xawaaraha ballaadhinta, haddana weli way qaali noqon kartaa in lagu martigaliyo degel websaydh heerkeedu sarreeyo. Iyo haddii aadan bixin wax badan, fursadaha ayaa ah in bartaadu si gaabis ah u socoto - luminta xaddigaaga ganacsi ee muhiimka ah. Markaad ka fekereyso server-yadaada martigelinaya bartaada, waa inay la yimaadaan codsiyo badan. Qaar ka mid ah codsiyadaas waxay u baahan karaan adeegahaaga inuu kula xiriiro kuwa kale
Inta badan kama wada hadalno amniga qadka ama Webka Madoow. In kasta oo shirkaduhu shaqo fiican ka qabteen nabadgelyada shabakadaha gudaha, ka shaqeynta guriga waxay u furtay ganacsiyada hanjabaado dheeri ah oo ku saabsan soo galitaan iyo jabsiga. 20% shirkaduhu waxay sheegeen inay la kulmeen khalkhal amni oo ka dhashay shaqaale fog. Ku adkaysiga guriga: COVID-19 saamaynta ay ku leedahay amniga ganacsiga Nabadgelyada ma aha oo kaliya masuuliyadda CTO. Maadaama aaminku yahay lacagta ugu qiimaha badan
Waa maxay VPN? Sideed Ku Xulataa Mid?
Talaado, July 14, 2020 Khamiis, Juun 16, 2020 Douglas Karr
Muddo sanado ah, waxaan u maleeyay in xafiis yeelashadu ay tahay maalgashi wanaagsan… waxay macaamiishayda siisay dareen ah in ganacsigeygu xasilloon yahay oo guuleysto, waxay siisay shaqaalahayga iyo qandaraasleyda meel dhexe, waxayna ii ahayd sharaf ii ah. Xaqiiqdu waxay ahayd in macaamiishaydu aysan soo booqan xafiiska oo, markii aan hoos u dhigay liistadayda macmiil oo aan kordhiyay wax-soo-saarkii mid walba, waxaan ku sii badanayay goobta iyo
Celceliska maqaalka si fudud looma qaban doono. Weli waan sii yaabayaa markaan fiiriyo mowduucyada xiisaha leh ee ku saabsan raadinta iyo bulshada laakiin markii aan bilaabo inaan akhriyo maqaalka, waa uun caajis iyo macluumaad la'aan. Haddii aad dhisto laba bog oo soo degitaan ah isla dalab sax ah, waxaan damaanad qaadayaa in mid ka mid ah oo uu soo qoro hal-abuur curyaan ah uu ku soo jiidan doono fiiro gaar ah. Xusuusin dhinac ah, wali waxaan ku haminayaa inaan noqdo qoraa weyn.